योगको शुरुवात कसरी भयो ?
सद्‌गुरु, आदियोगी अर्थात् पहिलो योगीको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, जसले मानवतालाई योगसँग परिचय गराएका थिए । ′पहिलो योगी′ एवं ′पहिलो गुरुको′ जन्मको बारेमा बताउँदै, उहाँ हामीलाई योगको शुरुवातको बारेमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ ।
यस परम्परामा शिवलाई थुप्रै वस्तुहरूले सुशोभित भएको देखाइन्छ । उनको शिरमा चन्द्रमा, निधारमा तेस्रो नेत्र, घाँटीमा सर्प, हातमा त्रिशुल अनि उनको वाहन नन्दी ! शिवको शिरमा किन चन्द्रमा ? घाँटीमा किन सर्प ? के शिवको निधारमा साँच्चिकै तेस्रो आँखा छ ? के उनी सदैव त्रिशुल र नन्दीलाई आफूसँगै राख्छन् ? वा, यी आभूषणहरूले केही गहिरो अर्थतर्फ सङ्केत गरिरहेका छन् ? आउनुहोस् जानौँ....
सद्‌गुरु, ती चार स्थानहरू— कैलाश, कान्तिसरोवर, काशी र वेल्लियनगिरि— को बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ शिवले आफ्नो अधिकांश समय बिताएका थिए । साथै, सद्‌गुरु हामीलाई ती स्थानहरूको शक्ति र उर्जाको बारेमा समेत बताउँदै हुनुहुन्छ । चित्रमा दिइएका विवरणहरू नुछुटाउनु होस् !